Web Based SMS (Group SMS or Bulk SMS) पठाउने तरिका | ICT for Local Bodies
Home / ICT Tools / Web Based SMS (Group SMS or Bulk SMS) पठाउने तरिका
Web Based SMS (Group SMS or Bulk SMS) पठाउने तरिका
Shankar Subedi - 12:33:00 PM ICT Tools Edit
1. Enter web address of SMS Service Provider after this .At the Right Corner You will see SMS client login (you will get username and password from your vendor after payment ). SMS client login मा Click गर्नुहोस .follow as soon in figure
2. SMS client login मा Click गर्नुहोसAuthentication will appear. Vendor ले provide गरेको username र password हाल्नुहोस. त्यस पछि Login मा click गर्नुहोस
1.3At the Left side you will see different navigation bar .first we have to create different groups like( Staff,Reporter and others). Phone book मा गएर add contact मा Click गर्नुहोस् र Group add गर्नुहोस
4.Group create भएपछि group member चाहिन्छ . त्यसको लागि excel sheet open गर्नुहोस र चित्रमा देखाए अनुसार fieldहरु भर्नुहोस्. यो काम सकेपछि excel sheet लाई save गर्दा .csv(comma delimited) मा save गर्नुहोस. अथवा direct पनि add गर्ने सकिन्छ.
excel sheet लाई save गर्दा .csv(comma delimited) मा save गर्नुहोला
. 5.यो सकेपछि upload contact मा click गर्ने अनि आफुले save गरेको .csv(comma delimited) को file को path दिने .Upload गर्दा कुन group को member हो त्योचाहि धयान दिनु पर्छ. यो गरेपछि contact list upload हुन्छ.
6. SMS Unicode मा पठाउनेहोे भने unicode मा type गर्नुहोस
7.अब SmS service मा click गर्नुहोस्, contact list हरु import गर्नहोस् यो गर्दा group sms ,bulk sms वा single person हो त्यो select गर्ने. अनि message type मा roman हो कि unicode select गर्ने अनि message box भित्र गएर message paste वा message लेखनु होस्.
अब अन्त्यमा send click गर्नुहोस.
web बाट पठाएको sms mobile मा आएको छ.
यो system को फाइदाहरु
सूचना प्रबिधीको प्रयोग,
एक पटकमा धेरैलाई पठाउन सकिने, आदि